ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကျွန်မ၊ သမိုင်းနဲ့ ထော်လော်ကန့်လန့် ပညာရေး
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 1:55 AM
သမီးတော်လေးရဲ့အရေးအသားကို ငါကိုယ်တော်မြတ် ရွှေဘောတော်ကျတော်မူတယ်ကွဲ့ ။
ဒါကြောင့် သမီးတော်လေးကို တောင်စမုတ်က ထောင်ထုပ်ကို ပေးသနားစေဗှား
တရားအဆုံးမှာ ငါးပါးလုံး ရဟန္တာမဖြစ်ပါ။ ရှင်ကောဏ္ဍည တပါးသာ သောတာပန်ဖြစ်ပါသည်။
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ကို ညွှန်းရင်တော့ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မက တရားတော် အစအဆုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး မဟာသမယ သုတ်ကို အပြီးသတ်ဟောအပြီးကို ဆိုလိုတာပါ။ အတိအကျ မရေးလိုက်မိတာ ဆောရီးပါ
That's it. THAT'S IT. U R ... Educated!!!